Morarano Imerintsiatosika Tanina orinasa hozaraina amin'ny mponina no fototr'olana.
Fampanantenana tanin'orinasa manana taratasy ara-dalana hozarain'ny olom-boafidy, nandritra ny fampielazan-kevitra no fototr'olana.
Kidnapping teratany Karana Nilamindamin-dratsy
Vory lanona nankalaza ny fetim-pireneny teny amin'ny toeram-ponenan'ny Masoivohon'ny firenena Indianina ireo teratany avy amin'ity firenena ity, omaly tontolo andro.
Lozam-pifamoivoizana -Tampoketsa Ny entana no nahamaika ny kaoperativa fa tsy ny mpandeha
Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny zoma alina teo, sahabo ho tamin’ny 9 ora mahery, tamin’ny faritra Ankazobe.
Tsy fandriampahalemana - Toliara Tra-tehaka ny mpanamboatra basy vita gasy
Tra-tehaky ny polisy ny mpamatsy basy vita gasy ny faritra Atsimon’ny Nosy. Ny 11 aogositra 2019 lasa teo tany Tsimenatra II, Toliara , lehilahy iray, 26 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny «Force d’intervention de Police »
Maty tsy tra-drano ilay mpanamory vao 40 taona. Araka ny fampitam-baovaon’ny zandary, teo amin’ny Pk 29 + 20, tamin’ny lalam-pirenena faha-7 no niseho ny loza. Raha iny hihazo fidinana iny ilay fiara lehibe nitondra vary an-taonina maro ka nanitsaka hisatra ilay mpamily, kinanjo efa tsy tao intsony ilay tsako kodiarana. Araka ny volazan’ireo mpiray dia taminy izay naratra, foana ny rivotra ka lasa tanteraka ny hisatra tamin’ny fotoana nilana azy. Io sampona ara-mekanika io no fototry ny loza ka nirimoromo ambavaloza, nivarina tanteraka tany anaty hantsana ilay fiara mpitatitr’entana. Nentina avy hatrany tao amin’ny CSB 2, tao Ambalavao ireo niharan’ny loza ka rehefa avy nozahan’ny mpitsabo ilay razana dia nomena ny fianakaviany nentina nankany Ivory, Antsirabe. Ireo tsy salama kosa izay avy any Ambohimandroso Antanifotsy sy Anosizato dia notsaboin’ireo dokotera teny an-toerana ary tsy misy ahiana ny ainy. Ny zandary avy ao amin’ny paositra Ambalavao no nandray an-tanana ny raharaha.